🥇 ▷ OnePlus TV waa inuu la imaadaa 55 & # 039; & # 039; QALL screen iyo nidaamka Android TV ✅
OnePlus TV waa inuu la imaadaa 55 & # 039; & # 039; QALL screen iyo nidaamka Android TV
Ka dib markii ay ku guuleysteen halyeeyo taageerayaasheeda ah milatariga suuqa muusikada, soo-saaraha Shiinaha OnePlus wuxuu sameyn doonaa kulankiisii ​​ugu horreeyay ee telefishanka caqli-gal ah dabayaaqada sannadkan, iyo soo deynta ayaa bixisay faahfaahinta alaabada shirkadda ugu horreysa ee qaybtaan. Marka loo eego macluumaadka, astaanta ‘Smart TV’ waa inay la timaaddaa nidaamka TV-ga Android waxayna soo bandhigi doontaa moodel ’55’ ah.
Ansixinta nidaamka hawlgalka Android ee ku saleysan barnaamijka TV TV ee Smart TV ayaa ku daatay muuqaalka aaladda qarsoon ee shirkadda ee diiwaannada ay sameysay Google. Sida ay sheegayaan wararka Xanta Android TV, shirkadda weyn ee farsamada ayaa xaqiijisay astaamaha loo yaqaan “Oneplus_Dosa_IN”.
Maanta, Google kaliya waxay xaqiijisay aaladda OnePlus oo leh magaca koodhka “Oneplus_Dosa_IN”.
Waan hubaa inuu yahay TV-ga OnePlus, marka waxaan xaqiijinayaa inuu socdo #AndroidTV.
“Dosa” waa canjeelo caan ah (faashad, savory) oo ka soo jeeda Koonfurta Hindiya. pic.twitter.com/ZntviSnx8F
– Xanta TV-ga Android (@androidtv_rumor) Ogosto 22, 2019
In kasta oo aan la garanayn, magaca ayaa ka tagaya tilmaamo aan ka hadlayno OnePlus TV. Marka lagu daro sheegida astaanta, aqoonsiga ayaa leh cinwaanka IN, laga keenay Hindiya, iyo erayga “Dosa”, oo ah magaca cuntada caadiga ah ee Koonfurta Hindiya.
Sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray maamulaha shirkadda Pete Lau, Hindiya ayaa noqonaysa waddankii ugu horreeyay ee telefishan caan ah laga helo bishii Sebtember. Taasi waa, haddii caddayntu sax tahay, wax soo saarka shirkadda Shiinaha waa inuu la yimaadaa nidaamka qalliinka ee TV-ga Android.
Qaabka ’55’ ‘waa la xaqiijiyay
Marka lagu daro joogitaanka telefishanka Android ee TV-ga ayaa u muuqday mid daadsan, warar kale ayaa sidoo kale tilmaamaya jaangooyooyinka ay ku jiri doonaan alaabada cusub ee soo-saaraha Shiinaha. Sida laga soo xigtay Bartamaha Android, telefishanka caqliga leh waxay imaan kartaa afar cabbir: 43, 55, 65 iyo 75 inji. Akis Evangelidis, gudoomiye ku xigeenka shirkadda Faransiiska ayaa xaqiijiyay ee barta Twitterka in 55 ” OnePlus TV uu soo bandhigi doono muuqaalka QLED, laakiin wax faahfaahin ah kama bixinin moodooyinka kale ee khadka ku jira.
(Isha: Akis Evangelidis / Twitter)
Meel kale oo daadsan, the Xanta Android TV sidoo kale shaaca ka qaaday in qalabka telefishanka ee Dosa-aqoonsaday ay ka mid yihiin Mediatek MT5670 CPU, nooc afarta ah oo ah nooca loo yaqaan ‘ARM model’, iyo kumbuyuutarrada sawir-gacmeedka Mali-G51. Go’aanku wuxuu noqon lahaa HD oo buuxa oo ku jirta liiska TV-ga, laakiin sheygu wuxuu taageeri doonaa 4K marka la ciyaarayo waxa ku jira.